PlusMe ကင်မရာ - အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံကို app ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » PlusMe ကင်မရာ - အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံကို app ကို
PlusMe ကင်မရာ - အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံကို app ကို APK ကို
ယခင်က BeautyPlus ငါ့ကိုအဖြစ်လူသိများ, ဒီအလင်း app အားသင်၏ဖုန်းတွင်လျော့နည်းအာကာသကိုအသုံးပြုသည်နှင့်စသည်တို့ကိုဟိန္ဒူ, မာရသီ, တမီး, ဂူဂြာရ, ဘင်္ဂါလီ, ဂု, ကန်နာဒါများကဲ့သို့ 12 ဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကားများရရှိနိုင်ပါသည်
အကောင်းဆုံးကို filter များ, ပျော်စရာဆိုးကျိုးများနှင့် beautification tools များနှင့်အတူအလွယ်ကူဆုံးဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်နှင့်ခွဲဝေမှု app ကို။ ယခု Download!
သငျသညျသွားလာရင်းလှပသောဓာတ်ပုံများယူကူညီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် filter များ! PlusMe သငျသညျကိုဖမ်းယူနှင့်သင့်အသက်တာ၌ရှိသမျှသောအဖိုးတန်အချိန်လေးကိုမှတ်မိကူညီပေးသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်း Tools များ:
သာယာလှပအင်္ဂါရပ်များကျယ်ပြန့်မျိုးစုံကနေရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျပိုမိုချောမွေ့အညစ်အကြေးကိုထုတ်မှုန်ဝါးနှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူသင်၏ဓါတ်ပုံများ retouch နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်အသက်တာ၏အလှဆုံးဗားရှင်းဝေမျှဖို့အချိန်ပဲ!
ကမ္ဘာတဝှမ်းသန်း 900 ကျော်အသုံးပြုသူများသည်နှင့်အတူ, Meitu ဦးဆောင်အလှအပနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ app ကိုဆော့ဖ်ဝဲရေးသူအဖြစ်စီးပွားဖြစ်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ကို virtual "ကြိုးစားကြည့်-ပေါ်တွင်" မိတ်ကပ်, ဆံပင်နှင့်ဖက်ရှင်များအတွက်နည်းပညာအပါအဝင်မိုဘိုင်းဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံ, တစ်ဦး Global Innovation ဖြစ်ပါတယ်။ us.meitu.com မှာပိုပြီးလေ့လာပါ။
အပျေါမှာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှငျ့သငျဖို့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက် PlusMe သင့်ရဲ့ device ကို ID ကိုအပါအဝင်ကန့်သတ်အသုံးပြုသူသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူရဲ့ data တွေကိုများအတွက် Encryption နှင့် privacy အကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အမြင့်ဆုံးပုံစံကိုပေးနှင့်မည်သည့်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုမသုံးကြဘူး။ အသေးစိတ်ဘို့ငါတို့သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီစစ်ဆေးပါ။
+ app တွေစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေမ
PlusMe ကင်မရာ - အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံကို app ကို
30.60 ကို MB
Meitu (တရုတ်) လီမိတက်
BeautyPlus - လြယ္ကူ ...
ဆေးမှုတ်: Easy ...